Shir weyne Qaran oo Muqdisho ka furmay | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home English News Shir weyne Qaran oo Muqdisho ka furmay
Shir weyne Qaran oo Muqdisho ka furmay
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta waxaa ka furmay shir weyne Qaran, kaasi oo looga hadlayo is dhexgalka bulshada, cirib tirka saboolnimada iyo sidii xuquuqdooda loo ilaalin lahaa dadka la heyb sooco.
Wasaaradda Shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya ayaa soo qaban qaabisay shirkan, iyada oo la kaashaneysa AMISOM iyo laamaha kale ee Dowlad Goboleedyada.
Shirkan ayaa waxaa ka qeyb galay Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari), Mas’uuliyiin ka tirsan Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, Guddiga arrrimaha Bulshada Baarlamaanka, xubno ka socday AMISOM iyo marti sharaf kale.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) ayaa sheegay dalka in uu ka soo kabsanayo dhibaatooyin badan oo ay ka mid yihiin Abaaraha, Cudurada, Dagalada Sokeeye iyo midib takoorka, kuwaasi oo in mudo ah dalka ka soo jiray.
Sidoo kale Guddoomiye Jawaari ayaa sheegay dhibaatooyinkan dalka dib u dhigay in ay sabab u tahay Jaahilnilnimada, loona baahan yahay in lagu dadaalo sidiii looga gudbi lahaa.
Dhanka kale ku xigeenka Midowga Afrika ee AMISOM Lydia Wanyoto oo ku magac dheer (Luul) ayaa sheegtay wadankeeda in uu soo maray arrin xun oo aad u dhibaato badan, waxayna sheegtay Soomaaliya in ay ka mid aheyd wadamadii u soo gurmaday.
Shirkan ayaa Magaalada Muqdisho waxa uu ka socon doonaa ilaa mudo Saddex maalmood ah, waxaana la rajeynayaa in uu ka soo baxo qorshaha talaabooyinkan Qaran oo lagu gorfeynayo arrimaha dhaqaalaha iyo kan siyaasadeed ee bulshada.
Previous articleXog”Shariif Xasan oo codsi u diray AMISOM+Sababta
Next articleCiidanka Itoobiya iyo Al-Shabaab oo dagaalamay